» घरमै आइसोलेसनमा बस्दा श्वास फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी १६ उपाय
२०७८ बैशाख १८, शनिबार १३:३४
काठमाडौं । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोभिड १९ रोग जित्न १६ उपाए सुझाएका छन् । घरमै आइसोलेसनमा बस्दा श्वास फेर्न गाह्रो हुँदा यी उपाय तुरून्त अपनाउन डा. पाण्डेले सुझाव दिएका हुन् ।
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला । ९८–९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो । १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला । शरीर दुखेमा/टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ ।
४. अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला । यो नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिया गराउँछ । तसर्थ नजिकको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसंग जांच गराउनुहोला । छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गरेर फोक्सोको अवस्था अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि ( एन्टिभाइरल/एन्टिबायोटिक ) खानुपर्ने हुन्छ । कोभिड निमोनिया भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ ।
१५. दिनमा १ /२ पटक मात्र समाचार हेर्नुहोला । सामाजिक संजाल सकभर नहेर्नुहोला । अनधिकृत समाचारले तनाव बढाउँछ ।